10 Meelaha Ugu Fiican Khubarada Yurub | Save A tareenka
Home > Safarka Iceland > 10 Meelaha Ugu Fiican Khubarada Yurub
Badda Orchins, badmaaxyada, fauna midab dhalaalaya, iyo qaar ka mid ah biyaha adduunka ugu cad cad, dhuuqida kuwan 10 meelahu waa maan-qaad maskaxeed. Kuwani 10 meelaha ugu fiican ee snorkeling in Europe, leeyihiin muuqaal layaableh at 20 m. biyaha hoostooda, waxayna hoy u yihiin qaar ka mid ah nolosha badda ee dunida ugu xiisaha badan.
1. Meesha ugufiican ee Udhisida UK: Devon
Laga soo bilaabo jasiiradda dhagxaanta leh ilaa Buundada London, Waqooyiga Tor Bay, halkan waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah meelaha ugu qurxoon ugxanta ee UK. Jewel anemones qaabab casaan iyo huruud dhalaalaya ah, aleelada, iyo kalluunka nooca loo yaqaan 'tompot blennies fish', waxaad ku qaadan kartaa maalin dhan snork-ga London Bridge.
Dad badan oo soo booqda Boqortooyada Midowday iyo Devon ayaa laga yaabaa inaysan xitaa ogeyn inay u safrayaan mid ka mid ah meelaha ugu fiican Yurub ee meelaha lagu ururiyo. Si kastaba ha ahaatee, Devon waa meel aad u wanaagsan oo lagu quudiyo uguna quusitaanka UK. Marka lagu daro London Bridge, Jasiiradda Lundy waa jawharad kale oo snorkeling ah, shaabadood cawl leh, moon jellyfish, iyo hoonbarrooyinka si loo arko.
2. Meesha ugu Fiican Khuurada Boortaqiiska: Big Berlenga
Boortaqiiska wuxuu caan ku yahay xeebaha cajiibka ah, Jasiiradda Berlenga Grande iyaduna kama reeban. Just 10 km u jirta Peniche, mid ka mid ah 10 meelaha meelaha ugu xiisaha badan ee Yurub, Berlenga waa jasiirado qurux badan. Waxay ka kooban tahay 3 jasiiradaha yaryar ee godadka, biyo buluug mugdi ah, iyo Markab Burburay.
Haddii aad isweydiiso, waad ku bogaadin kartaa burburka markabka qalabka qufulka. Intaa waxaa dheer, adduun weyn oo biyo hoosaad Atlantik ah oo xayawaan badeed leh sida kalluunka qorraxda, dhuxul, ayaa ku sugi doonta adiga wixii ka baxsan maaskaro. Qadiimiga Fort San Juan Bautista ee iska indhatiraya aaggan quruxda badan wuxuu kujiraa indhahaaga markaad soosocoto, ku darida qarsoodiga khibrada oo dhan.
3. Xadiiqadda Qaranka ee Port Cros, France
Ilaa qoto dheer ah 8 m. oo ku jirta raad khafiifa oo gaar ah, waxaad ku bogaadin kartaa boqolaal kalluun oo ku yaal Port Cros park qaranka. Marintaan ugu da'da weyn keydka dabiiciga waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican Yurubta. Plage de la Palud waa meesha ugu fiican ee lagu bilaabi karo xiisahaaga uumiga.
Marka la barbardhigo meelaha kale ee cajiibka leh ee khuurada liiskan, halkan waxaad ka heli doontaa 6 buoys wargelin ah oo leh xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan noolaha badda ee aad la kulanto: Bariga Atlantic peacock wrasse, comber rinji, koox dhif ah oo jilicsan, iyo kalluun kale oo badan oo midabo badan leh.
Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee quusitaanka adduunka, sida muuqata La Silfra waa meel ugub ku ah Yurub. Dabaasha inta udhaxeysa 2 Qaaradaha Yurub, qoyska, ama asxaabta, biyo dhalaalaya oo ka socda barafka Langjokull, waa waayo-aragnimo lama iloobaan ah.
Silfra waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu dhuuqo adduunka, aragtida cajiibka ah ee ku jirta awgeed 100 m. Midabada biyaha hoostooda, dabaalanaya inta udhaxeysa dariiqyada dhagxaanta leh iyo qoobabka, oo ammaantan oo dhan waxay u jirtaa saacad kaliya Reykjavik. Maaddaama biyuhu u muuqdaan kuwo aad u qabow, waa inaad ballansataa dalxiis, oo leh lebbis habboon iyo qalab si aad u kululaato.
5. Jasiiradda Cas, Sardinia, Italy
Biyo saafi ah oo nadiif ah ayaa lagama maarmaan u ah khibrad snorkeling la yaab leh. Isola Rossa oo ku taal Sardinia ayaa heshay shuruudaha ugu fiican ee khubur xiiso leh: biyo nadiif ah, dhul dhagax ah iyo godad, nolosha marina maskaxdaada qarxin doonta, iyo xeebo cadcad oo ciid ah si ay neeftaadu u qabato, inta udhaxeysa fadhiyada snorkeling.
Waxaad ka heli doontaa tuulada kalluumeysatada yar yar, Isola Rossa oo ku taal Waqooyiga-Galbeedka Sardinia. Dhuxul, kalluunka, dhagaxyada casna waa goobta ugu habboon xagaaga xagaaga. Qorraxda ka sakow, waxaad ku raaxeysan laheyd cayaaraha biyaha, Quusitaanka qulqulka, iyo dabeylo ku socda xeebta Talyaaniga. Sidaas, Hubso inaad xirxirto bacaha aan biyuhu xirnayn, iyo kamarad biyaha hoostooda ah oo lagu xasuusto adduunka biyaha hoostooda ee Sardinia.
6. Xadiiqadda Qaranka ee Cabrera Archipelago, Spain
19 jasiirado yaryar ayaa isku dhafan jasiiradaha Cabrera, hoy u ah nidaam dabiiciyeed badeed la yaab leh, aadanuhu uusan taaban. God buluug ah, keydka dabeecadda badda waa mid ka mid ah kuwa ugu qanisan Yurub, iyo safarkaaga snorkeling, waxaad ogaan doontaa in ka badan 500 noocyada. Kaluun kaluunka, octopuses, qoolleyda maqaarka, waa dhowr ka mid ah noolaha badda ee aad la kulmi doonto.
Waxaa intaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad fursad la yaab leh ka hesho si aad doonta uga dhex aragto qaar ka mid ah hoonbarrooyinka, aad ku sii jeeday Cabrera. Xeebta Isbaanishka waxay ka mid tahay meelaha xagaaga ugu caansan Yurub, iyo Mallorca waa meel riyo xeebeed ah oo loogu talagay safrayaasha adduunka oo idil. Sidaas, xirmo dharkaaga dabbaasha iyo dharka qubeyska, safar lama iloobaan ah oo nasasho ku tagaya Cabrera.
Weyn, buluug, oo qoto dheer, Lake Walchensee waa haro qurux badan oo Alpine Lake ah oo ku taal Jarmalka. 75 KM ka socota Munich, goobtan snorkeling waxay ku taal xarunta gobolka Bavaria. Sidaas, intaad hawadda u soo baxdo oo aad nasanayso, ah aragti muuqaal dabiici ah oo kugu xeeran siiyaan goobta ugu xasilloonida waayo-aragnimo rabaani ah.
Oo leh aragti weyn 5m ilaa 20m, Lake Walchensee waa mid ka mid ah 10 meelaha ugu fiican snorkeling in Europe. Intaas waxaa sii dheer, waxaad sahamin kartaa qoto dheer oo ka badan roobaadka qaanso roobaadka iyo ciridka, harada biyaha cad, markaad ku sii quusayso harada Walchensee.
In kasta oo dadka badankood kuu sheegaan dhuuqida badda Mediterranean-ka waa khibrad layaableh, qulqulka wabiga waa wax aan caadi ahayn. Deji biyo turquoise cusub, sare ee Austria, Viecht am Traunfall ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu quusto Austria. Wabiga Viecht am Traunfall wuxuu hoy u yahay dhulal qurux badan, iyo safarkaaga quruxdaan, waxaa lagugu martiqaadi doonaa inaad ku boodbooddid dhagaxtuur iyo baako.
Sidaa darteed, Kabaha dhuuqida Alps-ka Austria waa mid ka mid ah khibradaha ugu xiisaha badan Yurub. Marka aad dhammayso safarkaaga snorkeling, buuraha cagaaran iyo aragtida webiga ayaa ah picnic kaamil ah iyo goobta nasashada. halkan, waxaad dib u eegi kartaa talaalka biyaha hoosaadka leh ee cajiibka ah ee aad heshay, oo waxaad ku raaxeysataa hawada buuraha leh ee muuqaalka Austrian.
9. Jasiiradaha Medes Spain
Jasiiradaha 'Medes Islands' waa qayb ka mid ah keydka dabiiciga ah ee dabiiciga ah del Montgri. Waxay ku taal meesha ugu dambeysa ee xagaaga Isbaanishku tago, Costa Brava, Medes waxay hoy u tahay nolol badeed cajiib ah. Haddii aad la dhacsan tahay nolosha badda, ka dib halkan snorkeling, lama iloobi doono.
Toddobada jasiiradood oo reer Maaday, xeebta Catalonia, oo ku xeeran Badda Dhexe ee Badweynta ayaa ah janno faneed. Dhab ahaan, Dabaal-dillaaca Medes waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu sarreeya ee la sameeyo inta lagu guda jiro fasaxa Costa Brava. Iyada oo carruurta, saaxiibo, ama kali, Medes waxay hoy u tahay faun qurux badan, badmaaxyada, xiddigaha badda, iyo barracudas.
10. Meelaha Ugu Fiican Khubarada Yurub: Elba Talyaani
Red gorgonians hal dhinac ah, Dhuxul casaan iyo madow oo dhinaca kale ee xeebta ah, Elba waa janno. Gacanka Sant Andrea ee ku yaal jasiiradda Elba waa halka ay ka bilaabmaan wax kasta oo quus ah oo ku saabsan biyaha hoostooda. Ka fog dekedda iyo socod-socodka, nolosha badda ee jasiiradan Tuscan waa mid layaableh.
Marka lagu daro dhuxusha quruxda badan, kalluunka, iyo fauna, xeebta Talyaanigu waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka. Sidaas, haddii aad u baahan tahay inaad neefta ku qabato inta u dhexeysa godka sahaminta iyo raadinta kalluunka qorraxda, markaa xeebta bacaadka ah ee Elba ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu nasto.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kaa caawinno qorsheynta safar lama ilaawaan ah oo aad ugu aadeyso adduunyada hoostooda ku cajaa’ib badan 10 meelaha ugu fiican ee snorkeling in Europe tareen.
Ma rabtaa inaad ku dhajiso bartayada "1o Meelaha ugu Fiican ee Khuurada Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fbest-places-snorkeling-europe%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)